Triproof Lighting, Waterproof Ìhè, Dugara Alụlụụ eletrik - Ego
Home akpaaka Device
Smart Ọdụdọ equipments
Smart ezinụlọ ngwa
Waterproof ikanam Light
Tri-Gosiri ikanam Lighting
Ikanam N'uko Lighting
T8 Fluoresent Tri-Gosiri Light
ikanam nnukwu isi
Ikanam Batten Light
Ningbo Ego Kọmputa Technology CO., LTD e commited eme electrionic na ikanam ọkụ ngwaahịa OEM / ODM ọrụ. Aiming enye ọkụ ngwọta maka kọmputa ngwaọrụ arịrịọ na emebe, n'ichepụta na nzukọ. Anyị nwere ọtụtụ narị oversea ọkụ ahia ụlọ ọrụ, nnukwu engineering oru ngo, ọchịchị ụlọ ọkụ oru ngo na equipments inye ọkachamara quality ọkụ ọrụ. Na ewu ewu na nke smart n'ụlọ, anyị ụlọ ọrụ haziri ịbanye R & D imewe na mmepụta nke smart home ngwaahịa. Quality bụ isi nke anyị ụlọ ọrụ, anyị committeed ịbụ a elu-edu, na-eri-irè, smart home ahịa emeputa.
The na-akpali akpali ụwa nke ikanam ọkụ
Ka gị mmụọ nsọ site nnọọ iche ikanam akụkọ
Innovative na ọnụ ọkụ na ikanam
IP66 gburugburu usoro
IP66 oval usoro 2
Smart Life , Smart Iye Remote njikwa , smart Home, Smart Home Security , Smart Security & Protection Products , Smart Home Gateway , All Products